जब लकडाउनमा समाचार संकलन गर्न निस्केका फोटो पत्रकारको आँखा इँटाभट्टाका श्रमिकको पिडाले भिजे, पिडितहरुलाई बाढे यसरी राहत ! - VOICE OF NEPAL
६ बैशाख २०७७, शनिबार १९:४४
– रमेश लम्साल, काठमाडौँ |
माटोमा खेल्दाखेल्दै छविलाल मगरका हात र खुट्टा चर्चरी फुटेका छन् । रगत चुहिन मात्रै बाँकी छ । फुङ्ग उडेको अनुहार, वर्षौं ननुहाएको जस्तो कपाल र मैला कपडा । भित्र पसेका गाला अनि कमजोर शरीर । उमेर भने ५६ वर्ष ।
ललितपुरको झरुवाराशीमा रहेकोे बज्र इँटाभट्टामा काम गर्न सल्यानदेखि काठमाडौँ झरेका मगर पछिल्ला दिनमा काम नभएपछि खान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । परिवार पाल्न सकी नसकी इँटाभट्टामा काम गर्ने मगरलाई कोरोनाको प्रकोपले थप पीडा दिएको छ ।
‘उडी जाऊ भने पखेटा छैन, बस्नलाई मन भएन’ भने जस्तै भएको छ उहाँलाई । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको पनि लामै भयो । सल्यान जाने मन छ रे उहाँलाई ।
लकडाउनका कारण सवारी साधन नचलेका कारण उहाँलाई आफैँले काम गर्ने इँटाभट्टा पनि विरक्त लाग्न थालेको छ । बस्नलाई त समस्या थिएन, तर खाने सातु चामल सकिएका कारण कसरी प्राण धान्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
मगर जस्तै सल्यानका हरिकला थापा पनि बज्र इँटाभट्टामा इँटा बोक्ने काम गर्नुहुन्छ । विद्यालय पठाउनुपर्ने उमेर भइसकेको छ वर्षे छोरा बोकेर उहाँ रोजगारीको खोजीमा काठमाडौँ पस्नुभएको हो । काम चलिरहँदा उहाँलाई खान बस्नको कुनै समस्या थिएन । दिनभरि काम गर्दा उस्तै परेको दिन रु एक हजार ५०० सम्म कमाइ हुन्थ्यो । कोरोनाको कहरपछि लकडाउन जारी रहँदा उहाँको पनि चुल्हो निभ्ने अवस्थामा पुगेको थियो । “घर जाने कुनै व्यवस्था थिएन सर, त्यही भएर हामी त समस्या परेका छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, n“हामीलाई सम्झेर केही भए पनि राहत ल्यादिनुभयो, हामीलाई असाध्यैै खुशी लागेको छ ।”
इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदूरले खान नपाएको समाचार प्रकाशित गरेपछि कोरियामा रहेका एक फोटो पत्रकार, मलेसियामा रहेका व्यवसायी तथा हिमाल टाइम्सका प्रबन्ध निर्देशक विपीन राई, समूहका पूर्वअध्यक्ष कविन्द्रमान शाक्य राजुु ढुुङ्गेल , इन्दिरा नेपाल , वोनीता श्रेष्ठ तामाङ ,प्रवलरत्न तुलाधर ,मनोरमा पुडासैनी थापा , किशोर श्रेष्ठ ,सिव सत्याल,रमेश शाक्य,सुरज श्रेष्ठ,उमेश वस्नेत , सुर्य तामाङ ,जितकुमार वलामी , सुर्य मर्हजन लगायत संस्थाका सदस्यको सहयोग प्राप्त भएको थियो । यस्तै फोटो पत्रकार अजय महर्जन (लेन्सम्यान), निःशुल्क खाद्यान्न ढुवानीमा सहयोग गर्ने अरुण महर्जन र राकेश महर्जनले सहयोग गर्नुभएको थियो ।
“हामी फोटो पत्रकार समाचार सङ्कलन मात्रै नभई सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै संलग्न छौ, भन्ने तथ्य स्थापित गरेका छौँ, आगामी दिनमा अन्य स्थानमा समेत सहयोग उपलब्ध गराउँछाँै”, उहाँले भन्नुभयो । श्रमिकलाई राहत वितरणमा राससका फोटो पत्रकार प्रदीपराज वन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत संयोजन गर्नुभएको थियो ।
पोर्चुगल – स्पेन सिमाना थप १५ दिनका लागि बन्द , हवाई यात्रामा बन्यो यस्तो नियम !
नेपालमा कोरोना : काठमाडौँमा ३४८ सहित ८३६ जनामा संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु
पोर्चुगलका राष्ट्रपति मर्सेलोद्वारा १५ औं पटक संकटकाल थप !
एमाले कमिटीमा जबरजस्ती मेरो नाम जोडियो, कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा मेरो संलग्नता छैन : निर्मला ढकाल (अध्यक्ष – महिला समाज )